ပစ်မှတ်ဟောင်းတွေကို ပြန်စောင့်ကြည့်လာတဲ့ ယူနိုက်တက် ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ခဏရပ်လိုက်တဲ့ Three တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ပစ်မှတ်ဟောင်းတွေကို ပြန်စောင့်ကြည့်လာတဲ့ ယူနိုက်တက် ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ခဏရပ်လိုက်တဲ့ Three တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ၁၆ သင်းဆင့် ပထမ အကျော့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ဆီဗီးလား အသင်းဟာ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရပြီး ဒုတိယအကျော့ အတွက် အားသာချက် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ အိမ်ကွင်းမှာ ဂါလာတာစာရေး နဲ့ ဂိုးမရှိ သရေကျ ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် စပိန် တသင်း ဖြစ်တဲ့ ဘက်တစ် ကတော့ ဖရန့်ဖွတ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အခြား ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ လိုင်ယွန် က ပေါ်တို ကို ၁-၀ ၊ ရိန်းဂျားစ် က ရက်စတား ဇက်ဗီဒါ ကို ၃-၀ ၊ ဘရာဂါ က မိုနာကို ကို ၂-၀ တို့နဲ့ အသီးသီး အနိုင်ရခဲ့ပြီး အတ္တလန်တာ အသင်းကတော့ လေဗာကူဆင် အသင်းကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကျန်တွေ ကိုလည်း ယမန်နေ့က ကစားခဲ့ပြီး အက်စတွန် ဗီလာ က လိဒ် ကို ၃-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဗီလာ အတွက် ခြေစွမ်းပြ နေတဲ့ ကော်တင်ဟို ဟာ ဒီ ပွဲမှာလည်း ၁ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ ပါတယ် ။
အသင်းပိုင်ရှင် အေဘရာမိုဗစ် ဆန်ရှင်ချခံရမှု နဲ့ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ချဲလ်ဆီး ဟာ နောဝှစ်ချ် စီးတီး ကို အဝေးကွင်းမှာ ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိအောင် ကစားသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အခြားပွဲတွေမှာတော့ ဝုဗ် က ဝက်ဖိုဒ့် ကို ၄-၀ ၊ နယူးကာဆယ် က ဆောက်သမ်တန် ကို ၂-၁ တို့နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
အေဘရာမိုဗစ် ကို ဆန်ရှင် ချမှတ် အပြီးမှာတော့ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ဂျာစီ စပွန်ဆာ ဖြစ်တဲ့ Three ဟာ သူတို့ရဲ့ စပွန်ဆာ ကိစ္စတွေကို ဆိုင်းငံ့ထား လိုက်တယ်လို့ ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ပေါ့ဘာ ထွက်ခွာ သွားမယ့် ကွင်းလယ်ကို အားပြန်ဖြည့် ဖို့ အတွက် လာဇီယို ကွင်းလယ်လူ မီလန်ကိုဗစ် ဆာဗစ် ကို ချိန်ရွယ် နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဆာဗစ် ဟာ ယူနိုက်တက် နဲ့ သတင်းထွက်ခဲ့ ဖူးသူ ဖြစ်ပြီး ယူရို သန်း ၇၀-၈၀ လောက် ပေးချေရနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
UEFA တာဝန်ရှိသူတွေ ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် အပြီးမှာ ဒိုင်လူကြီး အဝတ်လဲခန်းထဲ ကို ဝင်ရောက်ကာ ဒေါသထွက် ပေါက်ကွဲ ခဲ့တဲ့ PSG ဥက္ကဌ နက်ဆာ အယ်ခါလီဖီ နဲ့ ဒါရိုက်တာ လီယိုနာဒို တို့ကို စည်းကမ်းချိုး ဖောက်မှု နဲ့ စွဲချက်တင် သွားမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
PSG တိုက်စစ်မှူး နေမာ ကတော့ ရီးရဲ နဲ့ ပွဲအပြီးမှာ အသင်းရဲ့ အဝတ်လဲခန်း အတွင်း ပြဿနာတွေ တက်ခဲ့ ကြတယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေ ကို မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အေဘရာမိုဗစ် နဲ့ အတူ ပူးတွဲ ဆန်ရှင် ချမှတ်ခံရမှုဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ နွေရာသီမှာ စာချုပ်ကုန်မယ့် ကစားသမားတွေ ကို လက်လွှတ် ရဖို့ ရှိလာခဲ့ပြီး ဒိန်းမတ် နောက်ခံလူ ခရစ်ရှန်ဆန် ကတော့ အသင်းပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်သစ် အတွက် လစာ ကိစ္စ ညှိနှိုင်းမှု အဆင်မပြေ သေးတဲ့ ဂျာမန် နောက်ခံလူ ရူဒီဂါ ကိုတော့ ကလပ် အသင်း ၃ သင်း အထိ လာရောက် ချိတ်ဆက် ထားတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းခေါင်းဆောင် အက်ဇ်ပီလီ ကွီတာ ကို တော့ ဘာစီလိုနာ က ၂၀၂၄ အထိ သက်တမ်း ရှိမယ့် စာချုပ် နဲ့ ကမ်းလှမ်း ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ရဲ့ wing-back တယောက် ဖြစ်တဲ့ ရိုင်ယန် ဆက်ဆဂ်နွန် ဟာ ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားခဲ့ပြီး လာမယ့် နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ် ကာလ ပြီးသည် အထိ ပြန်ကစား နိုင်ဖို့ မရှိ သေးဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
AC Milan အသင်းဟာ ယူကရိန်း က စစ်ဘေးဒဏ် ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့ အတွက် ယူကရိန်း အမှတ် အသားတွေ ပါဝင်တဲ့ ဂျာစီတွေကို ရိုက်ထုတ် သွားခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် လက်ဝှေ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဟာ ရုရှ နဲ့ ဘီလာရုစ် ကိုယ်စားပြု လက်ဝှေ့ သမားတွေကို ဗြိတိန် နိုင်ငံ အတွင်း ထိုးသတ်ခွင့် ပိတ်ပင် လိုက်ပြီလို့လည်း သိရပါတယ် ။
Previous Article ပိုချက်တီနိုကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဘာဘာတော့ဗ်
Next Article မန်ယူနိုက်တက်ဆီ ပြောင်းဖို့ ကာရေဂါရဲ့ တိုက်တွန်းချက် ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ၊ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ တူချယ်